Xagee kala marayaan amiirka Dubai iyo xaaskiisii ka baxsatay? | Xaysimo
Home War Xagee kala marayaan amiirka Dubai iyo xaaskiisii ka baxsatay?
Xagee kala marayaan amiirka Dubai iyo xaaskiisii ka baxsatay?
Maxkamad ayaa maanta oo talaado ah magaalada London uga furmaysay Amiirka Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum iyo xaaskiisa Amiirad Hayaa bintu Xuseen oo isku haysta labo carruur ah oo ay isu dhaleen.
Dacwaddan ayaa dhaawac ku ah Amiirkan maalqabeenka ah ee jecel in aan la ogaan arrimihiisa u gaarka ah isla markaasna neceb buuqa iyo is jiid jiidka, si la mid ah sida hoggaamiyeyaasha kale ee Khaliijka.
Saxaafadda Ingiriiska ayaa si gaar ah arrintan isha ugu haysay tan iyo markii ay soo shaac baxday,ayadoo saxaafadda Ingiriiskuna ay aad diiradda u saarto dabagalka wararka ku saabsan dadka caanka ah iyo kuwa maalqabeenka ah.
Warbaahinta ingiriiska ayaa sidaas si la mid ah u qaadaa dhigtay sheekada la xiriirta markii 19 sano ka hor gabadh uu dhalay Mohammed bin Rashid, oo la yiraahdo Shamsa ay isku dayday in ay kaga baxsato beertiisa ku taal Koonfuta Ingiriiska, laba bilood kaddibna arrintaasi way iska dhammaatay walina lama oga sida amiiraddan 38 jirka ah ay ku tagtay Dubai, walina gabadhaasi meel fagaare ah kama soo muuqan.
Waxaa sidaas si la mid ah sannadkii hore isku dayday in ay Dubai ka baxsato Amiirad Ladiifa oo walaasheed ah, balse dib ayaa loo soo celiyey kaddib markii ciidamada Imaaraadka ee sida gaarka ah u tababaran ay hawgal ku soo qabteen.
Warbaahinta Ingiriiska ayaa ogaatay in si weyn loo ilaaliyo xubnaha qoyska Sheekh Maxamed bin Raashid ee ku sugan Britain, marka ay guryahooda joogaan iyo markay bannaanka joogaanba ayagoo ilaalo la raaciyo marka ay ku sugan yihiin daaraha dhaadheer ee qoyskaasi ay ku leeyihiin England iyo Scotland.